Iine itsva COVID-19 kesi pasi, Bali inogona kuvhurazve kune vashanyi vekunze muna Gumiguru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Iine itsva COVID-19 kesi pasi, Bali inogona kuvhurazve kune vashanyi vekunze muna Gumiguru
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gurukota rezvehutano muIndonesia, VaBudi Gunadi Sadikin vakati kuvhurazve vatorwa kwakavakirwa pa70% yevaitarisirwa vanogamuchira yavo yekutanga COVID-19 kupfura.
Indonesia iri kufamba zvine hungwaru kuti ivhurezve miganho yayo kune vashanyi vekunze mushure meyakaipa yechipiri COVID wave.
Vashanyi vekunze ini ndinobvumidzwa kuenda kunzvimbo inozivikanwa yekushanyira chitsuwa cheBali nedzimwe nzvimbo dzekushanya.
Kuwedzeredzwa kweIndonesia kweakasimbiswa COVID-19 makesi akadonha ne 94.5% kubvira pakakwirira pakati paJuly
Gurukota rinobata zvinhu muIndonesia nezve Maritime uye Investment Affairs, Luhut Pandjaitan, akazivisa kuti nyika yeSoutheast Asia inogona kubvumidza vashanyi vekunze kuti vadzokere munyika muna Gumiguru.
Indonezhiya iri kufamba zvine hungwaru kuti ivhurezve miganho yayo zvichitevera kwechipiri njodzi COVID-19 wave, yakapeputswa neiyo Delta musiyano wehutachiona.
Asi mushure mekutsvedza kwakapinza muma COVID-19 kesi, vashanyi vekunze vanogona zvakare kukwanisa kuenda kunzvimbo inozivikanwa yepasirese chitsuwa che Bali uye zvimwe zvikamu zveIndonesia zvinozivikanwa nevashanyi vekunze kwenyika.
Sekureva kwegurukota, kuwedzerwa kwezviitiko zvakasimbiswa zve COVID-19 zvakadzikira ne 94.5% kubvira pakakwirira pakati paJuly.
"Tinofara nhasi kuti huwandu hwekubereka huri pasi pe1… Ndicho chakaderera panguva yedenda uye chiri kuratidza kuti denda riri kudzorwa," akadaro Luhut.
Zvimwe zviratidzo zvakanaka zvaisanganisira iyo yekurara yemubhedha muchipatara inodonha pasi pe15%, nepo positivity mwero, kana huwandu hwevanhu vakaedzwa vane hutachiona, hwaive pasi pe5%, akadaro gurukota.
Luhut akati kana maitiro nhasi aenderera "isu tine chivimbo kwazvo" kuti Bali inogona kuvhurwazve naGumiguru.
Pakutanga svondo rino, gurukota rezvehutano reIndonesia, Budi Gunadi Sadikin, akati kuvhurwa kwevekunze kwakabatanawo ne70% yevaitarisirwa vanogamuchira yavo yekutanga COVID-19.